Ku daabac Alaabadaada Tafaariiqda khadka tooska ah 'Milo | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 16, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkii hore waxaan la hadlay Rob Eroh, oo maamula kooxda wax soo saarka iyo injineernimada Milo. Milo waa mashiin raadinta wax iibsiga maxalliga ah oo si toos ah ugu dhafan dukaanka tafaariiqda ee iibka (POS) ama Qorshaynta Kheyraadka Ganacsiga (ERP). Tani waxay u oggolaaneysaa Milo inuu noqdo mashiinka raadinta ugu saxsan marka ay timaaddo aqoonsiga waxyaabaha ku jira alaabada gobolkaaga. Hadafka Milo ayaa ah alaab kasta ku hayso shelf kasta oo sheeko kasta oo ku saabsan shabakadda… Iyo sidoo kale yaraynta kakanaanta dukaamaysiga internetka iyo khad la'aanta. Waxay qabanayaan shaqo aad u wanaagsan durba!
Shirkaddu waa da 'yar tahay 2.5 sano jir laakiin waxay horey u heleen in ka badan 140 tafaariiqle ah oo leh 50,000 oo goobood oo ku yaal Maraykanka oo ay maalinba maalinta ka dambaysa ku darayaan. Waa nidaam fudud oo bixiya adeeg qurux badan oo cabsi leh. Milo waxay garaacday suuq weyn… dukaanleyda oo hadda doonaya oo aan rabin inay sugaan dhalmada (sida aniga oo kale!). Ma jiraan wax ka xanaaq badan marka la muujiyo bakhaar oo laga saaro iyaga invent marka Milo ayaa taas ka taxadartay, sidoo kale Waa tan raadinta tusaale ee aan u sameeyay LCD Televisions agagaarka Indianapolis:
Furaha guusha Milo waxay ahayd inay dadaalka ka saareen isdhexgalka… xaqiiqda, waxay bilaabeen Milo Fetch, adeeg beta ah iyo isdhexgal Intuit QuickBooks Point of Sale, Intuit Quickbooks Pro, Microsoft Dynamics Management System Management, Retail Pro iyo Barxadda iibka.
Milo alaabteeda ayaa horeyba loo heli karaa iyada oo loo marayo Laysarka Cas, barnaamij iskaanka bilaashka ah ee iPhone iyo Android. Milo sidoo kale horey ayaa looga heli karaa Android. Iyo 2012 Milo waxaa lagu dhex daray barnaamijyada kale ee moobiilka eBay. Marka laga reebo kaliya raadinta, Milo sidoo kale wuxuu tijaabinayaa astaamaha lacag bixinta, sidoo kale. Ka fikir in… shay raadsato, iibsato, oo aad u baxdid dukaanka ku yaal keydka geeska!
Haddii aad tafaariiqle tahay, ka hel alaabadaada qadka tooska ah hadda Milo.
Tags: Goobta iibka ee ComcashArbacada ahIntuit QuickBooks Goobta IibintaIntuit Quickbooks Proraadinta dukaamaysiga deegaankaNidaamka Maareynta Tafaariiqda Microsoft Dynamicsmilomilo soo qaadoTafaariiq Pro
Doug, tani waxay i xasuusineysaa xoogaa Zaarly iyo kan aan ugu jeclahay, TaskRabbit.